Nazi iingcebiso ezingama-33 ze-LinkedIn onokuthi uzenze iTwitter! | Martech Zone
Akukho ntsuku zininzi ndingafundi uhlaziyo kwi-LinkedIn, ukunxibelelana nomntu okwi-LinkedIn, ukuthatha inxaxheba kwiqela kwi-LinkedIn, okanye ukukhuthaza umxholo wethu kunye neshishini kwi-LinkedIn. I-LinkedIn ngumzila wobomi kwishishini lam- kwaye ndonwabile ngohlaziyo endilwenzileyo kwiakhawunti yeprimiyamu ekuqaleni kwalo nyaka. Nazi ezinye iingcebiso ezintle ezivela kwimidiya yoluntu kunye nabasebenzisi be-LinkedIn abavela kwiwebhu yonke. Qiniseka ukuba wabelana ngeengcebiso kwaye ulandele abantu ababonelela ngolwazi oluhle kangaka!
Abenzi bokwazisa kunye nezithethi zikawonke-wonke ikakhulu kufuneka zigcine iprofayile ye-LinkedIn enomtsalane ukukhusela amathuba okuthetha, kunye nokwakha ukuthembeka kubaphulaphuli. Iingcebiso ezingama-33 ze-LinkedIn apha ngezantsi zonke zishwankathelwe ngoonobumba abali-140 okanye ngaphantsi, isenza kube lula ukukhawulezisa ngeengcebiso kwaye siqhubele phambili nomsebenzi obalulekileyo wokusebenza kuluntu oludibeneyo. U-Leslie Belknap
Sizidibanise ezi tweets ukuze ukwazi ngokulula konqakrazo kubo ukubathumela i-tweet!
Tweet: Ngaphambi kwenkcazo, hlaziya iprofayili yakho ye-LinkedIn; abazimasa baya kuyiphonononga ukuvavanya ukuthembeka kwakho. @ Ethos3
Tweet: Guqula ikhonkco eliqhelekileyo kwiwebhusayithi yakho libe ngumnxeba wesenzo, ngakumbi kwiiprofayili zenkampani. @EntMagazine
Tweet: Yenza amangenelo kuyo yonke indima oyenzileyo kwisihloko somsebenzi ngasinye. Kulungile ukuba nemihla egqagqeneyo. @Forbes
Tweet: Yabelana ngolwazi olukumgangatho ophezulu kunye nenethiwekhi yakho ukwenza unxibelelwano olumanyana. @ReidHoffman
I-Tweet: Ubude obulungele ii-LinkedIn zefom ezinde zingama-500 ukuya kuma-1,200 amagama. Ubude bentsingiselo kubaphulaphuli bakho. @SmallBizTrends
Tweet: Tsiba inyathelo "umazi njani lo mntu". Cofa "Xhuma" kwiziphumo zophando, endaweni yeeprofayili. @SyiviLane
Tweet: Ngaba ufuna omnye umsebenzisi okanye inkampani ukuba ibone uhlaziyo lwemo ye-LinkedIn? Sebenzisa @mentions xa uposa. @HubSpot
Tweet: Musa ukuba yintyatyambo yodonga. Iprofayile yakho i-5x kunokwenzeka ukuba ijongwe ukuba uyangena kwaye uyasebenza kumaqela. @LinkedIn
Tweet: Xa uzazisa, ungazicingeli. Yiba nesisa, unyaniseke kwaye ujonge komnye umntu. @EmmieMartin
Tweet: Ufuna umsebenzi omtsha kwi-LinkedIn? Musa ukuvumela umphathi wakho azi; cima usasazo lomsebenzi wakho. @CareerOutcome
Tweet: Abasebenzisi be-LinkedIn abahlaziya iiprofayili zabo rhoqo bafumana imisebenzi emininzi kunontanga abanxibelelana nabaqeshi. @RimDey
Tweet: Censor ngokwakho. Ukuba awuzukuyithetha kudliwanondlebe lomsebenzi, sukuyithetha kwiqela le-LinkedIn, okanye iposti. @TechRepublic
Tweet: Cwangcisa ixesha lokusebenza kwi-LinkedIn. Hlaziya iprofayili yakho, jonga uhlaziyo, uthathe inxaxheba kwiingxoxo. @Yeyo_ye
I-Tweet: U-Evernote kunye ne-LinkedIn badibanisa; cwangcisa amakhadi oshishino, ulwazi lwe-LinkedIn, kunye neenowuthsi zenethiwekhi kwindawo enye. @Evernote
Tweet: Sebenzisa iprofayile yakho ye-LinkedIn njengesixhobo sokuthengisa. Yongeza ividiyo emfutshane malunga nenkampani yakho kwiprofayili yakho. @Salesforce
Tweet: Yongeza ixabiso kumaqela e-LinkedIn: yabelana ngemiboniso ebonakalayo eya kuba nomdla kumalungu eqela. @JayBaer
Tweet: Iiprofayili ezinemifanekiso zinokujongwa njenge-14x. Sebenzisa umfanekiso wobungcali onemvelaphi engathathi hlangothi. @LinkedIn
Tweet: Gwema amagama angama-buzz, afana nokudala, kunye nokukhuthaza. Nciphisa izichazi. Gxininisa izenzi. @BusinessInsider
Tweet: Sukusebenzisa umyalezo wesimemo ozenzekelayo: "Ndingathanda ukongeza kwinethiwekhi yam yobuchwephesha kwi-LinkedIn." @DailyMuse
Tweet: "I-LinkedIn ifumene ukuba izithuba ezingama-20 ngenyanga zingakunceda ufikelele kuma-60 ekhulwini kubaphulaphuli bakho." @Buffer
Itwitter: Elona xesha lilungileyo lokuthumela kwi-LinkedIn: NgoLwesibini nangoLwesine, phakathi kwe-7 kusasa kunye ne-9 kusasa lendawo. @SocialMediaWeek
Tweet: Ukuhlaziywa kweenkampani kunye nemifanekiso ine-98% yezinga eliphezulu lokubeka izimvo kunokuhlaziywa ngaphandle kwemifanekiso. @LinkedIn
Tweet: Khuphela usetyenziso oludityanisiweyo lwe-LinkedIn; yenzelwe ukwenza lula ukukhula kobudlelwane. @NtsikeleloCanga
Tweet: Uhlukile. Yibonise ubunyani. Sebenzisa umxholo wokuyila endaweni yokungagqibeki kwisihloko somsebenzi wangoku. @MarketingSherpa
Tweet: Uncedo lwabaqeshi, amathemba kunye namaqabane anokukufumana; Sebenzisa amagama aphambili kwiprofayile yakho ye-LinkedIn. @Umzi
I-Tweet: Umxholo we-LinkedIn ophumeleleyo uhlala ubonelela ngokuthatha izinto ezilungele ukusetyenziswa kwifomathi yoluhlu. @AndreyGidaspov
Tweet: Landela ukukhokela kukaDan Pink; ubhale kwakhona iposti "Iingcebiso ezi-3 zezithethi ze-TED" zeqonga lokupapasha le-LinkedIn. @DanielPink
Tweet: Vuma abantu obahloniphayo. Thumela umyalezo wokubulela xa umntu ekuxhasa. @JeffBullas
Tweet: Uluhlu lwamava amavolontiya kwi-LinkedIn; I-42% yabaphathi bokuqesha bayayixabisa njengamava omsebenzi osesikweni. @LinkedIn
Tweet: "Amaqela e-LinkedIn abonelela ngelinye lawona mathuba mahle okubeka uphawu onawo kwimidiya yoluntu." @Forbes
Tweet: Uyasokola ukugcwalisa indima kwinkampani yakho? Endaweni yokuqesha umntu oza kugaya, joyina inkonzo yokuQesha abaDibeneyo. @Amaxesha
Tweet: Yabelana ngomxholo wokuqala; "Umxholo ngoku ujongwa ngaphezulu kwezihlandlo ezithandathu ngaphezulu kwemisebenzi enxulumene nemisebenzi kwi-LinkedIn." @JasonMillerCA
Tweet: Sebenzisa ezibonwayo; Nika intetho yeSlideShare kunye ne-infographics kwiprofayile yakho kunye nezithuba ezinde. @SMExaminer
tags: Andrey gidaspovbufferishishini ngaphakathiimyuziyam yosukudaniel pinkiUmmartinI-Ethos3vernoteforbeshubspotUJason MillerUJay BaerJeff Bullasjillian ilesLinkedInamaqela adityanisiweyoiintetho ezihlanganisiweyoiprofayili edibeneyoiingcebiso zokudibanisaukuthengisa i-sherpaUkuthengisaSherpaamaxesha e-york amatshaReid hoffmanungqamekoukuthengisaUmxhasi woLuntu weMidiyaIveki yemidiya yoluntuUmgaqo wesylvan
Imilinganiselo emi-3 yoDalo loMxholo